Isizwe sethulelwe inkosi yaso - Ilanga News
Home Izindaba Isizwe sethulelwe inkosi yaso
Isizwe sethulelwe inkosi yaso
Amanye amalungu omndeni kawagculisekile ngokubekwa kwayo
IBAMBENE ngezihluthu ebukhosini besizwe saKwaMabaso, eMsinga, njengoba sekukhishwe olunye usuku lokugcotshwa kwenkosi yesibili. NgoLwesihlanu bekwethulelwa isizwe inkosi entsha, uMnu Thokozani Mntungwa (osesithombeni), ovunywe uhulumeni esihlalweni. Kuhlatshwe izinkomo ezingaphezulu kweziyisihlanu. UMnu Mntungwa uyindodana yenkosi ekhothame nyakenye, inkosi Thembitshe Mntungwa, ubangisana noyise omncane, uMnu Mfaniseni Mntungwa, olamana nenkosi ekhotheme, bazalwa ngumama nobaba oyedwa.
Uhlangothi oluphikisayo luthi ngomhla ka-16 kuMbasa (April), luzokwethulela isizwe uMnu Mntungwa (uyise omncane), nje ngenkosi entsha yesizwe sakwaMabaso, luchitha uMnu Mntungwa (indodana), owethuliwe ngoLwesihlanu. UMnu Mlobeni Mntungwa, wohlangothi oluphikisa inkosi uMnu Thokozani Mntungwa, uthi ngeke bavumele kudukiswe ubukhosi ekubeni bewazi umlando wesizwe.
Utshele ILANGA ukuthi bazamile ukuvimba ukwethulwa kwenkosi uMnu Mntungwa (indodana), ngokomyalelo wenkantolo enkulu eMgungundlovu, okhishwe ngo-Lwesine, yathi akumiwe kancane ngoba bebefake isikhalo kodwa lwaqhubeka lolu hlangothi.
“NgoLwesithathu sizohambisa amaminithi ethu omndeni enkantolo ngoba ebesinawo, abhalwe ngesiZulu kwathiwa asiwahumushe. Uma sizovumela ukuthi ubukhosi buthathwe uMnu Thokozani, ngabe sifuna uMsinga ubuyele ekubulaweni kwabantu. Kasisafuni kusuke izimpi. Siyalazi iqiniso ngalobu bukhosi, asikwazi ukuthi ubukhosi bungathathwa yikhohlwa,” kusho uMnu Mntungwa. Uthi ngenxa yokulwa komndeni, kuze kwacelwa ijaji Isaac Madondo, ukuba lifike emhlanganweni lilalele zonke izinhlangothi ukuze leluleke umndeni. Uthe ukuqokwa kwenkosi uMntungwa (indodana), akwenzekanga ngokuvumelana kwezindlu zonke zakwaMabaso.
“Besibabiza emhlanganweni bengafiki abesisu senkosi ekhothame nyakenye kwaze kwahanjiswa amaminithi emnyangweni, sachithwa ngoba ayengenaso isitembu senkantolo yenkosi.
“Azivumanga naso izingane zayo, kanti nazo zipheka ibhodwe lazo eceleni. Empeleni amamini-thi afike nomnyango emndenini ngokuphakanyiswa kukaThokozani kasiwazi thina,” kusho uMnu Mntungwa. Inkosi uThokozani yamukelwe ngokusemthethweni wuMnyango wezokuBusa ngokubaMbisana neziNdaba zoMdabu, KwaZulu-Natal, oholwa uNgqongqoshe uMnu Sipho Hlomuka, noNdunankulu wesifundazwe, uMnu Sihle Zikalala. Ngokusho komndeni ophikisa ukubekwa kwenkosi entsha, uthi eminyakeni edlule ubukhosi bebuphethwe inkosi uBhekabantu Mntungwa , kwangena inkosi uThembitshe Mntungwa, ekhothame nyakenye.
Kubikwa ukuthi indodana yenkosi endala, uMnu Mlindeni, ishone ngo-1991, yase ibanjelwa inkosi uThembitshe.
Lo mndeni uthi kwenzeka iphutha ekuthatheni kwesihlalo kwenkosi uThembitshe, ngoba ungowesibili ekuzalweni kwabo, bekufanele buthathwe nguMnu Mfaniseni Mntungwa, ongowesithathu ekulamaneni kwabo esiswini. Ebuzwa uMnu Mlondeni Mntungwa ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ubukhosi buthathwe uMnu Thembitshe Mntungwa esikhundleni sikaMnu Mfaniseni Mntungwa okunguyena owesithathu, uthe phambilini bekuliwa kakhulu endaweni, kulwa izigodi isaMpofu, iSidakeni, iNyadu neNkandla kwaphela inqwaba yabantu kanti bekusakhothame inkosi endala ngaleso sikhathi.
“Sahlala kakhulu isizwe singenayo inkosi, kwabe sekusukuma inkosi uThembitshe (ekhothame nyakenye) yakhuza ulaka olwalukhona esizweni. Abantu bakwazile ukumlalela ngoba bekungowakwabo wenkosi endala. “Wabe esebanjiswa ubukhosi ngenxa yokuthi ingane (uMlindeni) ebizalwa inkosi uBhekabantu, yayisencane ngaleso sikhathi. Uhlale kanjaloke esihlalweni futhi sizamile ukumehlisa esaphila sahluleka,” kusho uMnu Mntungwa. UMnu Simanga Mabaso oluleka inkosi entsha, uthi abanezikhalo mabahlale phansi ukuze isizwe sibuseke ngendlela efanele. “Ukubungazwa kwenkosi sikwenze ngokuvunyelwa wumthetho. Thina sifisa ukuthula esizweni kubanjiswane. Ukwethula kwabo inkosi yabo, kumele bazi ukuthi lokho kuzoxova isizwe. “Uma kubekwa inkosi kuyohlale kukhona ukuphambana kwemibono, masingavumeli inyama ngoba iyamosha, okwenziwayo akulandelwe wumthetho. “Uma benganelisekile ngesinqumo esikhishwe eMgungundlovu sokuvuna inkosi uThokozani, bona mabathathe udaba baludlulisele eBlomfontein,” kusho uMabaso.
Previous articleKukhalwa ngothisha othandana nabafundi
Next articleKubulawe umbhishobhi nenkosikazi yakhe